CRTV သတင်းထောက်ဟောင်းသည် Equinoxe TV - teles relay ကိုဆန့်ကျင်သည်
CRTV သတင်းထောက်ဟောင်းသည် Equinoxe TV ကိုဆန့်ကျင်သည်
By Tele RELAY တစ်ခု	 On နိုဝင်ဘာ 21, 2020
CRTV Sud-Ouest ၏ဒေသဆိုင်ရာဘူတာမှညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း Ngomba Endeley သည် Equinoxe TV သည်ပြည်သူ့အသံလွှင့်ဌာနနှင့် Jamot ဆေးရုံစင်တာတို့အကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြtreatmentနာများကိုကုသရာတွင်အထူးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်။
ပုံ (ဂ) အခွင့်အရေး
အမှန်မှာ၊ စာနယ်ဇင်းသမားSéverin Tchounkeu ၏ရုပ်မြင်သံကြားဌာနများမှည ၈ နာရီသတင်းစာတွင်ထုတ်လွှင့်သော element တစ်ခု၏ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲချက်များကိုတုံ့ပြန်ခြင်း ဗစ်တိုရင်း Stephanie Djomoအန်ဂိုဖုနိုအရေးပေါ်အခြေအနေခံစားခဲ့ရသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသူသည်အမျိုးသားပြည်သူ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဂျေမိုစင်တာတို့အကြားပေါင်းကူးတံတားတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးစိတ်ရောဂါကုသမှုတွင်၎င်း၏ထိရောက်မှုကြောင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
"Yaoundéရှိ Jamot စင်တာ၏အလူမီနီယံမျှော်စင်ရှိရုပ်မြင်သံကြားသည် ISO 2009 ကိုလိမ်လည်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ ခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက် လူမျိုးတို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ”ကျနော်တို့အပေါ်နားမထောင်နိုင်ဘူး Equinoxe တီဗီလှိုင်းများ, နိုဝင်ဘာလ 20, 2020 ။
Ngomba Endeley ကအစာကြေလို့မရဘူး။ နို ၀ င်ဘာ ၂၁ ရက်ကသူ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင်တင်သည့်သတင်းတွင်မီဒီယာသည်အလွန်စိတ်ဆိုးကာရေးသားခဲ့သည်။ “ Jamot စင်တာသည်Yaoundéအခြေစိုက်ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအသက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးရှားရှားပါးပါးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသည်။ စကားလုံးများကိုစစ်တိုက်ရာတွင်ဤအဖွဲ့အစည်းကိုလှောင်ပြောင်သရော်သည့်အနေဖြင့်အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုသည်ဤကျော်ကြားသောဆေးရုံတွင်နှစ်သိမ့်မှုတွေ့ခဲ့ကြသူထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲတွေမှာတောင်ဆေးရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မသင့်တော်ဘူး”.
အစီရင်ခံစာရေးသားသူသည်သူခေါ်ဆိုသည့်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာမဖော်ပြခဲ့ပေ။ Yaoundéရှိ Jamot စင်တာ၏လူမီနီယံမျှော်စင်ရှိရုပ်မြင်သံကြား” သတိပြုသင့်သည်မှာYaoundéရှိ Jamot ဆေးရုံသည်ကင်မရွန်းရှိရည်ညွှန်းသောစိတ်ရောဂါကုသမှု ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကင်မရွန်းရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြား (CRTV) မှကျောက်တုံးနားတွင်တည်ရှိသည်။
သတိပေးချက်အနေဖြင့်ယူဂျင်းဂျမန်းသည်ပြင်သစ်စစ်ဘက်ဆရာဝန်တစ် ဦး ၏အမည်ဖြစ်ပြီး ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကင်မရွန်း၌အိပ်မောကျခြင်းရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သူ့နာမည်ကိုဒီဆေးရုံသို့ပေးခဲ့သည်။
Yaoundéရှိ Jamot ဆေးရုံသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းမှုအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်မှာမှန်သော်လည်း၊ ၎င်းတွင်အဆုတ်အထူးကုကဲ့သို့သောဆေးဝါးများအထူးပြုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံထားသည့်အချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မဖယ်ထုတ်နိုင်ပါ။e။ သူတို့ကအဆုတ်ရောဂါတွေအထူးသဖြင့်တီဘီရောဂါကိုကုသပေးတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်နှေးခြင်း မှလွဲ၍ တီဘီရောဂါ (တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ဆေးယဉ်ပါးခြင်း) ကိုခံစားနေရသောလူနာများစွာကိုထိုနေရာတွင်ကုသပေးသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောငှက်ဖျား၊ ဆီးချို၊ အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါနှင့်အခြားရောဂါများတွင်လည်းကုသသည်။
ရှိပြီးသား 6000 ကျော်မှတ်ပုံတင်ပြီး!
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.lebledparle.com/fr/societe/1117040-affaire-stephanie-djomo-un-ancien-journaliste-de-la-crtv-se-dresse-contre-equinoxe-tv တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။